Dawladnimada wanaagsan sirteedu ma aha hebello dar Illaahay loo tuhmayo oo la magacaabo iyo ashkhaas si ku meel gaadh,,, - Wargane News
Home Opinion Dawladnimada wanaagsan sirteedu ma aha hebello dar Illaahay loo tuhmayo oo la...
Dawladnimada wanaagsan sirteedu ma aha hebello dar Illaahay loo tuhmayo oo la magacaabo iyo ashkhaas si ku meel gaadh ah loo gu bogay oo magacyadooda la tirsado midna. Waayo ma jiro caadaadkaa dawladnimo cid ku horumari kartaa.
Dawladnimada wanaagsan sirteedu waa dhismaha hay’aad qaran oo taabo-qaada iyo siyaasad farsamo oo jid iyo itijaah ay raacdo leh – fulin adagna la la dabo socdo.
Kun hebel oo PhD ah haddii la magacaabo oo aaney jirin siyaasad la yaqaan oo ay ku socdaan isbeddel ma iman karo. Sirtu ma aha hebellada – sirtu waa nooca dawladnimo, siyaasad iyo jidka dhaqaale ee hawl dawladnimo mari doonto.
Insha Allahu berri ayaan soo bandhigi doonaa nooca dawladnimo ee maanta dalkani ku samatabixi karo – la gu na hirgelin karo barnaamijkii xisbiga iyo ammuurihii adeeg ee uu ballanqaaday.